» Dhageeyso Maqalka:Hay’ada Bishacas oo ceelBiyo ka qoday Deeganka Laanmadow ee gobalka Mudug….
Qaraxyo Nooca Bambaanooyin Ah Oo Xalay lagu weeraray isgoyska KM-4 ee magalada muqdisho,
War Deg Deg Ah”Askar Ka Tirsan Ciidamada Dowlada Oo Dil Toogasho Ah Lagu Fuliyay ?
Dhageeyso Maqalka: Gabar Wariyed aheed oo ka shekeeysay kufsi hada ka hor loo geestay kana war bixiyay qaabkii lagu qiyanay gaabdhani……..
War deg deg ah Atirisho caan aheed oo goordhow ku Geeriyootay Shil gaari warar dheerad ah oo la xariira arinkaasi……
Dhageeyso Maqalka:Hay’ada Bishacas oo ceelBiyo ka qoday Deeganka Laanmadow ee gobalka Mudug….
Aug 16, 2013 - jawaab	ShareHay’ada Bisha Cas ee Soomaaliyeed ayaa shalay galab ceel biyood ku wareejisay Dadka Deegaanka Laanmadow kaas oo ay Deeganka ka hirgalisay.
Munaasabdii ceelka lugu wareejinayay ayaa waxaa ka qayb galay wafdi uu hogaaminayay Gudoomiyaha G Mudug Mudane maxamed Yuusuf Jaamac Tigay, Masuuliyiin kasocday wasaarada biyaha Maamulka Hay’ada Bisha cas qaybteeda Gobolka Mudug iyo waliba Maamulka iyo wax garadka deegaanka laanmadow.
Like this:Like Loading... « Warbixinta Ka HoreysayAqriso Dood Cajiib ah oo dhax martay Nin Mulim ah iyo Nin masiixi ahaa oo markii danbane islaamay(ALAAHU AKBAR)..	Warbixinta Xigto »Dhageeyso Maqalka:Maxkada Gobolka Gobolka Mugudug oo xukun k kala duwan ku riday……	Leave a Reply Cancel reply